कोरोनालाई जितेकी डाक्टर भन्छिन्, ‘आत्मबल बलियो बनाउनुस्, कोरोनालाई जितिन्छ’ - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
कोरोनालाई जितेकी डाक्टर भन्छिन्, ‘आत्मबल बलियो बनाउनुस्, कोरोनालाई जितिन्छ’
भरतपुर निवासी डा. प्रतीक्षा पौडेलले कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरमा काम गर्न थाल्नु भएको एक वर्ष भयो । उनी दन्तरोग विशेषज्ञ हुन् । बिरामीको नियमित उपचारमा खटिने क्रममा उनलाई भदौ ४ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो ।
‘कोरोना पोजेटिभ रिपोर्ट आएपछि धेरै नै डराएँ’, उनले भनिन्, ‘त्सपछि आत्मबल बलियो बनाएँ । स्वास्थ्यकर्मी भएकाले निको भएर सेवामा फर्किनु छ भन्ने अठोट बुनें’, उनलाई कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो कुनै लक्षण देखिएको थिएन ।
२१ दिनको अस्पतालको बसाइँपछि उनी कोरोनामुक्त भइन् । अस्पतालबाट घर फर्किदा उनलाई लिन बुबाआमा अस्पताल परिसर पुगेका थिए । ‘दैनिकजसो मेडिटेसन गर्थेे, बेसारसहितको तातो पानी पिउथे’, उनले भनिन्, ‘खानासँगै फलफूल पनि प्रशस्त खानुपर्छ, आत्मबल बलियो बनाउदा सजिलै कोरोनालाई जित्न सकिन्छ ।’
एक हप्ता घर बसेपछि बिरामीको उपचारमा फर्किने पौडेलको भनाइ थियो । देश र जनताको लागि सेवा गरिरहँदा आफू सङ्क्रमित हुन पुगेको भन्दै उनले कोरोनालाई आत्मबल उच्च राखेमा सजिलै जित्न सकिने बताइन् । जिल्लाका कोरोना सङ्क्रमितमध्ये १५ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी छन् । स्वास्थ्यकर्मी नै सङ्क्रमित हुन थालेपछि यहाँ चुनौती थपिएको थियो । कोरोना सङ्क्रमित स्वास्थ्यकर्मीलाई यहाँ दुव्र्यवहारको प्रयाससमेत भएको थियो । घटनाको चौतर्फी आलोचना भयो ।
डा. पौडेलको बसाइँ होस्टलमा भएकाले उनले नमिठो अनुभव बटुल्न परेन । आइसोलेशनमा बसेका बेला स्वास्थ्यकर्मीलाई अपमान गरेको समाचार सुनेपछि उनलाई एकदमै नराम्रो लाग्यो । कोरोना सङ्क्रमण भएकै बेला उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष आएर यसको विरोध समेत गरिन् ।
कोरोना पोजेटिभ भई आइसोलेशनमा बसेकीकी पोखरा निवासी डा. श्रेया गौतम पनि दन्तरोग विशेषज्ञ नै हुन् । ‘बिरामीको उपचारमा खटिएकी थिएँ’,उनले भनिन्, ‘मलाई शुरुमा सुख्खा खोकी देखा पर्‍यो । विस्तारै कोरोनाका लक्षण देखिएपछि स्वाब सङ्कलन गरें । रिपोर्ट पोजेटिभ आउँदा सारै डर लाग्यो ।’
कोरोना लाग्यो भनेर डराउन नहुने उनको भनाइ थियो । यसबाट छुट्कारा पाउन र अरुलाई पनि सङ्क्रमण हुन नदिन भने विषेश सावधानी अपाउनुपर्ने डा. गौतम बताउँछिन् । मानव व्यवहार परिवर्तन हुनसके कोरोनालाई परास्त गर्न सकिने उनको तर्क छ । साबुनपानीले हात धुने, मास्क लगाउने र स्यानीटाइजरको प्रयोगले धेरैसम्म कोरोना लाग्नबाट बचाउने डा. गौतमले बताइन् ।
कोरोनालाई आत्मबलले सजिलै परास्त गर्न सकिने भएकाले सङ्क्रमितलाई हेलाको दृष्टिले नहेर्न सबैलाई उनले आग्रह गरिन् । घर परिवार र आफन्तको हौसला र प्रेरणाले आफूले कोरोनालाई सजिलै जितेको गौतमको प्रतिक्रिया थियो । उनी २० दिनको अस्पताल बसाइँपछि कोरोनामुक्त भएकी थिइन् ।
नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको बेला क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा सबैभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी सङ्क्रमित भए । क्यान्सरको उपचार गर्न देशभरबाट बिरामी आउने भएकाले यहाँको सङ्क्रमण दर उच्च थियो ।
क्यान्सर अस्पतालको आकास्मिक वार्डमा कार्यरत नर्स सविता बस्नेत पनि यसबाट अछुतो रहनसकिनन् । उनी अस्पतालले उपलब्ध गराएको क्वाटरमा परिवारसँगै बस्ने गस्थिन् । ‘तीन वर्षको छोरा र दीर्घरोगी ससुरासँगै हुनुहुन्थ्यो’,उनले भनिन्, ‘छोरालाई सर्‍यो कि भन्ने ठूलो डर लाग्यो ।
अस्पतालको एक वार्डमा आइसोलेनमा बसें, १४ दिनपछि फेरि काममा फर्किएँ ।’ आत्मबल बलियो बनाएर आफू अहिले पनि कोरोना सङ्क्रमितको अग्रपंक्तिमा बसेर काम गरिहेको उनले बताइन् ।